पुरानो भन्दा पुरानो जण्डिस रोग को अचुक औसधि हाम्रै गाउँ घर मा पाईने यो फलले, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग – Sapana Sanjal
July 2, 2021 194
Sapana Sanjal : पुरानो भन्दा पुरानो जण्डिस रोग को अचुक औसधि हाम्रै गाउँ घर मा पाईने यो फलले, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग काठमाडौँ । विभिन्न रोगको औषधी हाम्रै वरीपरी हुन्छन् । गाउँ घरमा हुने त्यस्ता जडिबुटीहरु कतिपय हामीले पहिचान गर्न सकेका हुँदैनौं भने कतिपय थाहा पाउँदा-पाउँदै पनि प्रयोग गर्ने तरिका नजानेर खेर गइरहेका हुन्छन् ।
पानी अमलाबारे कतिपयलाई थाहा छैन होला । अमलासँग परिचित भएपनि पानी अमला पनि हुन्छ र ? भन्ने प्रश्न पनि कतिपयलाई उब्जिन सँक्छ । पानी अमला वन जंगलमा पाइने एउटा वनस्पति हो । जंगलमा पाइने एक किसिमको झार जसको जमिन मुनि फलेको दाना औषधिको रुपमा खाइन्छ । हाम्रो आफ्नै गाउँ घर तिर पाईने जसलाई पानी अमला अर्थात भुइँ अमला पनि भन्ने गरिन्छ।
१) यसको प्रयोग: पानी अमलाको पुरै भागलाई सुकाएर पिंधेको धुलोलाई ७–८ ग्रामको दरले मिश्री पानीसँग मिलाएर एक महिनासम्म खानाले जण्डिस रोग निको हुने आयुर्वेदले जनाउँछ। यसको ताजै बोटलाई पिधेर निस्किएको एक चौथाई रसलाई मिश्री पानीमा मिलाएर पिउँदा पनि हुन्छ । यो मधुमेहका रोगीकालागि पनि लाभदायक मानिन्छ।
यो पनि पढ्नुस: साबधान ! को-रोना संक्रमण भएका मानिसले यी खानेकुराहरु भुलेर पनि नखानुहाेस् !
को-रोना संक्रमण भएपछि खानेकुराहरुमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । जुन खानेकुराले हाम्रो शरीरलाई बलियो बनाउन मद्धत गर्दछ भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई पनि कमजोर हुनबाट बचाउँछ त्यस्ता खानेकुराहरु मात्र खाने गर्नुपर्छ । को- रोना संक्रमित भएका व्यक्तिले निम्न खानेकुराहरुबाट टाढै बस्नु होला ।
Prevभारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसम विज्ञान विभागको आग्रह
Nextपर्सिदेखि चाहिने जति कोरोना खोप आउँछ : प्रधानमन्त्री